Isi nke uwa: njirimara, mbido na ihe mejuputara | Network Meteorology
Isi nke .wa
Nuklia bụ nke ikpeazụ n’ime akwa ụwa. A makwaara ya site na aha endosphere ma ọ bụ ọkụ na-ekpo ọkụ nke dị n'etiti etiti mbara ụwa. Na nhazi ya, anyị nwere ike ịhụ ma isi ihe siri ike nke dị n'ime na nke dị n'èzí nke bụ mmiri mmiri. N'ihi convection okwukwo nke na-site ọdịiche dị na njupụta nke ihe na Isi ụwa ihe Neticwa ndọta.
N'isiokwu a anyị ga-ahụ nyocha zuru oke nke ụwa na mkpa ya.
1 Mmalite na nguzobe
2 Ngwakọta nke isi ụwa
4 Core n'ígwé
4.1 Ngalaba nke mpụga
4.2 Ne isi
Mmalite na nguzobe
Isi ya malitere mgbe ụwa gachara. Mgbe ụwa malitere ihe dịka ijeri afọ 4.500 gara agaỌ bụ naanị otu bọọlụ edo edo. Nke nta nke nta ọ na-ata ahụhụ site na nrụrụ redio na okpomoku nke e nyere site na nguzobe nke ụwa mere ka ọ kpoo ọkụ karịa ruo n'ókè nke agbaze ígwè. Oge a mgbe ụwa rutere na ọnọdụ okpomọkụ a ka a na-akpọ ọdachi iron. Ihe a wụrụ awụ nke dị na nkume na ihe okwute niile na-eme ngwa ngwa na ọsọ karịa. N'ihi mmegharị nke obere ihe ndị dị ka mmiri, ikuku na silicates, ha mere ka ha bụrụ akwa nke ụwa.
Na ntụle nke ihe na-ebuwanye ibu ma dị arọ dịka iron, nickel na ọla ndị ọzọ dị arọ wee nwee ike ịdọrọ ike ndọda nke ụwa na etiti. N'ụzọ dị otú a, ihe anyị maara dị ka ntọala izizi mbụ nke ụwa. A maara usoro a dị ka nke ọdịiche dị na mbara ụwa na ọ bụ ebe anyị malitere ịhụ na ụwa mejupụtara ọkwa dị iche iche nwere njirimara na njiko dị iche iche.
Ngwakọta nke isi ụwa
Dị ka anyị maara, ndị Ala jikọrọ ọnụ na uwe mịrị bara ụba na mineral. Otú ọ dị, ihe mejuputara uwa bu iron na nickel. Anyị na-ahụkwa ihe ndị na-agbaze na ígwè a na-akpọ siderophiles. Ihe ndị a abụghị ihe a na-ahụkarị na jikọrọ ọnụ na, n'ihi nke a, akpọwo ha ọla dị oke ọnụ. N'ime ọla ndị a dị oke ọnụ ahịa anyị na-ahụ cobalt, ọla edo na platinum.
Isi ihe ọzọ dị na isi bụ sọlfọ. 90% nke sọlfọ niile dị n'ụwa bụ isi. Isi ihe a maara bụ akụkụ kachasị mma nke ụwa dum. Ọdịdị dị n'ime na-abawanye na okpomọkụ ka anyị na-abawanye na omimi. Otú ọ dị, nyere ihe karịrị kilomita 6.000 nke kewara anyị site na ụwa ruo etiti ụwa, O siri ezigbo ike ịmata na ọnọdụ okpomọkụ nke ígwè a gbazere agbaze na nickel dị. Ọnọdụ okpomọkụ anaghị adịkarị otu. Ha na-agbanwe agbanwe dabere na nrụgide, ntụgharị nke ụwa na ngwakọta nke ihe ndị mejupụtara ntọala ahụ.
Ebe ọ bụ na mmiri iyi na-eme ka ihe ndị ahụ na-agagharị, enwere ụfọdụ ihe na-abanye "ọhụụ" na isi ebe ndị ọzọ na-ahapụ ọzọ ma ha agbazighị agbaze ọzọ. Nke a bụ n'ihi ịdị nso ma ọ bụ anya nke ihe ndị ahụ site na etiti na ebe ịgbaze ha dị oke elu.
Nnyocha na-ekwukarị na ọnọdụ okpomọkụ nke ụwa Ọ na-esi na 4000 Celsius gaa 6000 degrees, odika.
N'etiti njirimara ya anyị na-ahụ na ihe ndị na-enye aka na ikpo ọkụ dị na isi bụ ire ere nke ihe ọkụkụ. Igwe redioaktivu na-enye ike dị ukwuu mgbe ha mebiri. Ike ahụ na-eme ka ọ ghọọ okpomọkụ mgbe a tọhapụrụ ya. Ihe akpụrụ ọkụ nke sitere na mbara ụwa ka dị, na-eme ka isi dị ọkụ. Ihe ọzọ na-enye okpomọkụ bụ okpomọkụ a na-ahapụ n'ime mmiri dị n'ime mmiri ma na-ewusi ike na njedebe ya mgbe ọ zutere isi ime ahụ. Cheta na isi ihe dị n’elu ụwa anyị a bụ mmiri mmiri n’ime ya, ọ dịkwa n’ime.
Oge ọ bụla anyị gbadatara omimi 1 km site na ụwa, ọnọdụ okpomọkụ na-abawanye site na ihe dị ka ogo 25 ọzọ. Nke a pụtara na gradenti geothermal dị ihe ruru ogo 25. A maara oke nke na-ekewa etiti dị n’etiti na mpụta dị ka nkwụsị Bullen. Akụkụ kachasị dị n’ime etiti bụ ihe dịka puku kilomita atọ n’okpuru ụkwụ anyị. Mana nke kachasị njọ, etiti etiti ụwa bụ ihe dị ka puku kilomita isii.
Iji nye gị echiche nke obere ihe anyị magburu onwe ya na mbara ụwa, nke ahụ olulu miri emi emere abiala ridala 12,3 km. Ọ dị ka a ga - asị na anyị sitere na apụl, naanị anyị abanye n'ime akpụkpọ ahụ (ma ọbụnadị nke ahụ).
Ka anyị lebakwuo anya na isi oyi akwa.
Ngalaba nke mpụga
Ọ dị ihe dịka kilomita 2.200 ma nwee ígwè na nickel na steeti mmiri. Ọnọdụ okpomọkụ ya dị gburugburu 5000 Celsius. Ngwongwo nke mmiri mmiri na oyi akwa a nwere viscosity dị ala nke ukwuu, ya mere ọ nwere ike ịbụ onye na-agbanwe ngwa ngwa ma dị nro. N'okwu a, enwere oke iyi ọkụkụ na-eme ka ike ndọta nke ụwa mepụta.
A na-ahụkarị akụkụ kachasị ekpo ọkụ nke mpụta dị na nkwụsị Bullen.
Ọ bụ bọl na-ekpo ọkụ ma dị egwu nke mejupụtara tumadi ígwè. Ọnọdụ okpomọkụ na-eru ihe dịka 5200 Celsius. N'ebe a, nsogbu dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde ikuku 3,6.
Ọnọdụ okpomọkụ nke dị n'ime bụ nke ọma karịa agbaze ígwè. Otú ọ dị, ọ dị na steeti siri ike. Nke a bụ n'ihi na, n'adịghị ka isi mpụta, nrụgide nke ikuku dị elu karịa nke ahụ na-egbochi ya ịgbaze.
Site na ozi a ha ga enwe ike ịmatakwu gbasara ụwa na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Isi nke .wa
Oke osimiri na oke osimiri